Shirkii looga hadlayay dhammeystirka dastuurka KMG oo lagu soo gabagabeeyay Muqdisho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Shirkii looga hadlayay dhammeystirka dastuurka KMG oo lagu soo gabagabeeyay Muqdisho
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasaaradda Dastuurka Xukuumadda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku soo gabagabeysay shir wadatashi ah oo ku saabsan dhammeystirka Dastuurka KMG ah kaas oo ay layeelatay aqoonyahanadda Soomaaliyeed.
Dr Xuseen Cabdi Cilmi oo ah wasiir ku xigeenka Wasaaradda Dastuur oo soo xiray kullanka wadatashiga ahaa ayaa sheegay in aqoonta dadka Soomaaliyeed loo baahan yahay gaar ahaan dadka Waxbarashadoodu heerka sare tahay.
“Waxaan u baahanahay aqoonka ku jirta Aqoonyahanada Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan maxaa yeelay waxaa ku jira wax badan oo aan dhexdeena laga heleyn sidoo kale faa’iido badan ugu jirto dadka Soomaaliyeed” ayuu yiri Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Dastuurka Soomaaliya.
Wasaaradda Dastuurka ee Xukuumadda ayaa dadaal badan ugu jirta sidii ay u soo dhammeystiri laheyd Dastuurka KMG ah kaas oo hadda meel wanaagsan maraya.
Dammeystirka Dastuurka qabyada ah